South Asian Game 2019 - Khelpati
प्रधानमन्त्रीको ‘कन्फ्युज’ प्याकेज !
'महिलालाई खेलकुदमा लाग्न प्रेरणा मिलेको छ'
सावित्रा भन्छिन् – स्वर्ण जितेर ईतिहास रच्छौ
भुटान भन्छ – फाइनलमा नेपाल नपरोस्
गुमनाम तर निरन्तर !
आँशु पिएर निशाना
‘नेपाली हैन भन्छन्, तर मेरो पदक नेपाललाई हो’
राता मान्छेले दिलाएको स्वर्ण
'झोलीमा परिसकेको स्वर्ण गुम्यो'
साउदीका बाबालाई काजलको स्वर्ण उपहार
आँटले रचेको ईतिहास !
जगदीशको दाबी – भलिबलमा स्वर्ण पदक लगाउँछौ
डेब्यु खेलमै विश्व कीर्तिमान !
दुई स्वर्ण छोरीमा समर्पित
एक वर्षपछि सागको खर्च विवरण सार्वजनिक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै १३ औं सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
साग खेलकुद – नयाँ अध्यायको सुरुवात सागलाई अवसरको रुपमा लिएर राष्ट्रको गरिमा प्रर्दशन गर्न खेल स्थल, अतिथी सत्कार र राष्ट्रिय टिमको तयारी लगायत काममा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल ओलम्पिक कमिटि, राष्ट्रिय खेल संघ अहोरात्र खटेको अवस्था थियो ।
बास्केटबलका पदक विजेता खेलाडी सम्मानित स्कुलले फुल कोर्टमा सहभागी प्रतिक्षा मगर तथा थ्री बाइ थ्रीमा सहभागी सोनी वाइबा र मिना गुरुङ सम्मानित गरेको हो ।
सागका पदकधारी टेनिस खेलाडी सम्मानित सिंगल्सको कांस्यलाई २५ हजार, डबल्सलाई १५ हजार र टिमलाई १० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । खेलाडी र प्रशिक्षकलाई गरी कुल २ लाख ३५ हजार नगद प्रदान गरिएको थियो ।
वर्षाको कारण खेलाडीको नगर परिक्रमा प्रभावित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले सागका पदकधारी खेलाडीलाई बिहान ११ बजेबाट नगर परिक्रमा गराउने बताएपनि वर्षाको कारण नगर परिक्रमा ढिला सुरु भएको छ ।
खेलाडीको नगरपरिक्रमा आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले सागका पदकधारी खेलाडीलाई नगरपरिक्रमा सहित सम्मान गर्न लागेको हो ।
सागका पदकधारीलाई नगर परिक्रमा गराईने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले शुक्रबार पदक विजेता खेलाडीलाई काठमाडौं र ललितपुरको विभिन्न स्थानमा घुमाईने जनाएको छ ।
सागमा स्वर्ण विजेतालाई ९ लाख दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई जनही ९ लाख रुपैयाँबाट सम्मानित गर्ने भएका छन् ।
सागका स्वर्णधारीलाई २५ लाख दिन तरुण दलको माग तरुण दलले साग खेलकुदमा खेलाडी र प्रशिक्षकको सेवा र सुविधामा भ्रष्टचार भएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
स्क्वासमा नेपाललाई कास्य पुरुषमा अरहान्तकेशर सिंह, अमृत थापा मगर, अमिर ब्लोन र दीपक थापा तथा महिलामा कृष्णा थापा, भावना सुनुवार, विपना ब्लोन र स्वस्थानी श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
साग सम्पन्न, पाकिस्तानमा भेट्ने बाचा नेपालका मुख्य तीन शहरमा १० दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा कुल २६ खेलमा दक्षिण एसियाका ७ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
महिला बास्केटबल : नेपाललाई रजत त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा मंगलबार भएको फाइनलमा भारतसंग पराजित हुँदै नेपालले रजत जितेको छ ।
जुडो : मिक्स टिममा नेपाललाई कास्य लगनखेलस्थित आर्मीको कभर्डहलमा मंगलबार नेपालले मिक्स टिममा कास्य जितेको हो ।
प्रहरी ज्यादतीको रंगशालामा विरोध १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को रिपोर्टिङको क्रममा प्रहरीले चापागाईमाथि कुटपिट गरेको थियो ।
नेपाललाई ऐतिहासिक ५१ स्वर्ण, हेर्नुहोस् नामावली पुरुष फुटबलमा स्वर्ण जितेसँगै नेपालले स्वर्णमा अर्धशतक पुरा गर्यो । अर्थात् नेपालले कुल ५१ स्वर्ण हात पार्यो ।
भुटानलाई हराउँदै नेपाललाई स्वर्ण त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार भुटानलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले स्वर्ण पदक जितेको हो ।
IND 174 93 45 312
NEP 51 60 95 206
SRL 40 83 128 251
PAK 31 41 59 131
BNG 19 32 87 138
MAL 104 5
BHU07 13 20